Ukuqondisa ku-Printer Bank Bank China Manufacturer
Incazelo:Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta ye-Qatar,Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta Qld,Ukuqondisa kumshayeli wephrinti ye-Power Bank
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-Power Bank > Ukuqondisa ku-Printer Bank Bank
Nge-RF-A3UV Power Bank Printer ungabala futhi uhambise izindawo zakho zasekhaya. Ungaphrinta kunoma iyiphi impahla, uzalise ngokuqondile kunoma yikuphi okubonakalayo noma yimiphi imidwebo yezithombe ozikhonzile, uguqule futhi unikeze izikhala zakho eziyingqayizivele. Njenge-fresco yedijithali, kodwa ungakhetha izithombe. Noma yiliphi ifayela ledijithali oyifunayo, noma yisiphi isayizi oyithandayo nanoma iyiphi indawo onayo, ngemibala ephezulu yekhwalithi ehlala njalo.
Ukuqondisa ku-Printer Bank Bank Ukuthengiswa kwempahla ye-"non-contact" ye-jet uhlobo lwe-digital jet, Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta ye-Qatar uhlelo lokusebenza lukhulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici ezizuzayo ze- Direct Direct kuya ku-Power Bank iphrinta Qld RF-A3UV:
Ohlakaniphile: 1. Ukuqondisa kumshayeli wephrinta ye-Power Bank Phrinta ndawonye (umhlophe + umbala / umbala + umhlophe);
Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta ye-Qatar Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta Qld Ukuqondisa kumshayeli wephrinti ye-Power Bank Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta ye-Xpress Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta i-Jam Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta i-Xp Ukuqondisa kwi-Power Bank iphrinta yezindleko Ukuqondisa ku-Power Bank Printer Ebay